निस्कासन भयो महिला लघुवित्त जस्तै अर्को आइपियो कति दिने आवेदन ? ⋆ afno sansar
निस्कासन भयो महिला लघुवित्त जस्तै अर्को आइपियो कति दिने आवेदन ?
प्रकासित : ११ असार २०७८, शुक्रबार ०३:४७
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज (असार ११ गते) देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। लघुवित्तले १९ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गरेको हो।
लघुवित्तले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका १९ लाख ७७ हजार ३०० कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। यसमध्ये लघुवित्तले ३० हजार ४२० कित्ता अर्थात जारी पूँजीको ५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीहरुका लागि र कुल निष्काशनको ५ प्रतिशत अर्थात ९८ हजार ८६५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ।
सर्वसाधारणले बाँकी १८ लाख ४८ हजार १५ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार १५ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार २५ गते हुनेछ।
लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसका साथै मेरोशेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ।आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बि माइनस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ।
यस्तो रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरु समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सु्रक्षित र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) १०४ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको लघुवित्तको प्रतिशेयर नेटवर्थ ३०५ रूपैयाँ २७ पैसा रहेको छ।
मेरो लगानी बाट
आजदेखि सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओ खुल्यो,कति कित्ता दिने आवेदन ?
फेरी अर्को लघुवित्तको आईपीओ आउदै , कहिले होला निस्कासन
केहि दिनमा खुल्दै ६३ करोडको आईपीओ, पर्ने जतिको भाग्य चम्किने ?
निष्कासन भयो मैलुङखोलाको आईपीओ, कति दिने आवेदन ?
जीवन विकास लघुवित्तको शेयर डिम्याटमा , ओपनिङ्ग रेञ्ज यति धेरै।
इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइपियो निस्कासन मिति सार्बजनिक , पर्ने जति मालामाल हुने
बढ्ने भयो अब देखि आईपीओ पर्ने सम्भावना,तर कसरी ?
११ असार २०७८, शुक्रबार ०३:४७
कान्तिपुर मिडिया पब्लिक कम्पनी बन्यो, आईपीओ कहिले निस्कासन हुदै छ ?
कार्यवाहक अध्यक्ष दिन्छु भन्दै भीम रावललाई ओलीको फोनः रावलले के दिए जवाफ ?
बानेश्वर भेलापछि झाँक्रीले राखिन् एकताको लागि यस्तो प्रस्ताव, मान्लान् त ओलीले ?
यी हुन् देउवालाई विश्वासको मत दिने ओली पक्षीय सांसदहरु
फेरी अर्को आइपियो निस्कासन हुदै , कहिले होला त् ?